कोदोको खिर बनाएर “बीबीसी मास्टर सेफ” को उत्कृष्ट ४ मा पुगे सन्तोष: नेपाली खाना विश्वभर चिनाउँदै ! (भिडियो सहित) – live 60media
कोदोको खिर बनाएर “बीबीसी मास्टर सेफ” को उत्कृष्ट ४ मा पुगे सन्तोष: नेपाली खाना विश्वभर चिनाउँदै ! (भिडियो सहित)
काठमाडौं – ‘बीबीसी मास्टर सेफ प्रोफेसनल्स् २०२० यूके’ को शीर्ष ४ मा नेपाली सेफ सन्तोष साह पुग्न सफल भएका छन् । नेपाली खानालाई विश्वभर चिनाउने क्रममा उनले कोदोको खिर बनाएका थिए । ‘बीबीसी वान’ मा मंगलबार राति प्रसारित फाइनल राउन्डको पहिलो चरणबाट उनी टप ४ मा पुगेका हुन्।
उत्कृष्ट ४ मा पुग्न सन्तोषले ‘इन्भेन्सन् राउन्ड’ मा डिजर्टको रुपमा कोदोको खिरसँगै आँपको कुल्फी र तराईमा प्रचलित आँपको ‘अमोट’ तयार गरेका थिए । त्यस्तै निर्णायकको आग्रहमा खरायोको ‘फ्रेन्च क्लासिक डिस’ लाई उनले नेपाली भुटन स्टाइलमा तयार पारेका थिए।
सन्तोष पांच वर्षको हुदै उनको बुवाको मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि उनको आमामा ठुलो पारिवारिक भार थपिएको थियो । फलस्वरूप सन्तोष करिब दश वर्षको हुदा देखि नै पेट पाल्न र पढ्नको लागि श्रम गर्न थाले । उनले करिब ६ किलोमिटर टाढाको फ्याक्ट्रीमा गएर पाउरोटी टाउकोमा राखेर बेच्न ल्याउथे । उनि पन्ध्र वर्षको हुदा एसएलसी पनि दिए तर उनि पास हुन सकेनन । त्यस पछी उनि भारत पसेको सन्तोष सन्तोष सुनाउछन।
धेरै अनुभव नभएको पन्ध्र वर्षीय ठिटोले भारतमा पनि राम्रो काम पाउने कुरै भएन । उनले गुजरातको एक पांच तारे होटेलमा भाडा माझ्न थाले । उनले त्यति बेला नै होटेल पनि यति ठुलो हुने रहेछ भन्ने थाहा पाएको बताउछन । तिनै सन्तोष अहिले विश्वको नम्बर एक सेफ बन्ने होडमा छन । उनि सेफ कै रुपमा लन्डनमा कार्यरत छन । उनले निकट भविष्य मै नेपाली कुइजिन मात्र पाउने नेपाली रेस्टुरेन्ट खोल्ने योजनामा छन । त्यसको लागि कम्तिमा सय बढी रेसेपी समेत तयार भैसकेको उनि सुनाउछन।
नेपाली संचारमाध्यमहरुसंग कुराकानी गर्ने क्रममा यस अघि नै फाइनलको लागी कोदोको केहि न केहि परिकार बनाउने घोषणा गरेका थिए। सन्तोष उत्कृष्ट ४ मा पर्न बनाएको खाना र त्यो क्षणको भिडियो हेर्नुहोस :
← आँखा नदेख्ने ४ छोराछोरी हुर्काउँदै आएका लक्ष्मणलाई फेरी पर्यो अर्को वज्रपात (भिडियो हेर्नुहोस)!
७ दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ, ॐ लेखि सेयर गरौं ! →